JW Usoro Ihe Omume Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Jenụwarị 25-31, 2016
Abụ nke 10 na Ekpere
“Jehova Chọrọ Ka Anyị Jiri Obi Anyị Niile Na-efe Ya”: (Nkeji 10)
Ezra 7:10—Ezra kwadebere obi ya
Ezra 7:12-28—Ezra kwadebere ịlaghachi Jeruselem
Ezra 8:21-23—Ezra nwere obi ike na Jehova ga-echebe ndị ohu ya
Ezra 9:1, 2—Olee ihe mere ndị Juu ịlụ ndị mba ọzọ ma ọ bụkwanụ ndị mba ọzọ ịlụ ha ji jọgbuo onwe ya? (w06 1/15 20 ¶1)
Ezra 10:3—Gịnị mere e ji chụlaa ndị inyom ahụ na ụmụ ha? (w06 1/15 20 ¶2)
Ọgụgụ Baịbụl: Ezra 7:18-28 (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya)
Ozi Ụlọ n’Ụlọ: (Nkeji 2 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Ihe ngosi. Nye mmadụ Ozi Ọma Si n’Aka Chineke, a tụlee isi nke 8, ajụjụ nke 1, paragraf nke 1. Gwakwa onye ahụ ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Nletaghachi: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) A ga-eme ihe ngosi otú a ga-esi gaa nletaghachi na nke onye natara Ozi Ọma Si n’Aka Chineke. Gị na onye ahụ mụọkwa isiokwu nke 8, ajụjụ nke 1, paragraf nke 2. Gwakwa ya ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Ọmụmụ Baịbụl: (Nkeji 6 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) A ga-eme ihe ngosi ebe e ji Ozi Ọma Si n’Aka Chineke, isi nke 8, ajụjụ nke 2 amụrụ mmadụ Baịbụl.
“Otú Anyị Ga-esi Na-emekwu Nke Ọma n’Ozi Ọma—Kwadebe Obi Onye I Ziri Ozi Ọma Maka Mgbe Ị Ga-abịaghachi”: (Nkeji 7) Okwu ndị na-ege ntị ga-etinyetụ ọnụ. Kpọnye vidio ga-egosi otú anyị ga-esi zie ozi ọma n’ọnwa Jenụwarị. Ya kpọchaa, a ga-akọwa otú ndị nkwusa e gosiri na ya si kwadebe obi ndị ha ziri ozi ọma maka mgbe ọzọ ha ga-abịa mgbe ha nyechara ha Ụlọ Nche nakwa Ozi Ọma Si n’Aka Chineke.
Mkpa ọgbakọ: (Nkeji 8)
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: ia isi nke 7 ¶15-27, na igbe dị na peeji nke 66 (Nkeji 30)
Ihe ndị anyị ga-amụ n’ọmụmụ ihe a na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ maka Jenụwarị 25-31, 2016